ယူနိုက်တက်စတိတ်ရှိလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှု - ပျံ့နှံ့မှုနှင့်ခန့်မှန်းသူများ (၁၉၉၉) - သင့် ဦး နှောက်သည်အပြောက်
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၌လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလုပ်မဖြစ်: ပျံ့နှံ့ခြင်းနှင့်ခန့်မှန်း (1999)
မှတ်ချက် Kinsey ကတည်းကရာစုနှစ်ဝက်အတွင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှု၏လူ ဦး ရေအခြေပြုအကဲဖြတ်ချက် (1948) ။ သူတို့သည် 18-59 အရွယ်ရှိအမျိုးသားများ၏အပိုင်းအစတစ်ခုကိုလေ့လာခဲ့သည်။ စစ်တမ်းကို 1992၊ 1999 တွင်ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေခဲ့သည်။ ယောက်ျား၏ 5% ကသာ Erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုကိုဖော်ပြပြီး 5% ကသာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဆန္ဒပြင်းပြမှုကိုဖော်ပြခဲ့သည်။ ထိုအရာကို 2013-2015 မှလူငယ်များအတွက်နှုန်းထားများသည် 30-54% ဖြစ်သည်။ တစ်ခုခုရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြောင်းလဲသွားပြီ
မူရင်းအလှူငွေ | ဖေဖေါ်ဝါရီလ 10, 1999
အက်ဒွပ် O. Laumann, PhD; အန်သိုနီ Paik, MA; ရေမွန် C. ရို, ပါရဂူဘွဲ့
ဂျေအေအမ်အေ။ 1999;281(6):537-544. doi:10.1001/jama.281.6.537.
ြဒပ်မဲ့သော | နည်းနာ | ရလဒ် | ပုံ | နိဂုံး | အညွှန်း
context မကြာသေးမီကဆေးဝါးကုသမှုဆိုင်ရာတိုးတက်မှုများကပြည်သူ့အကျိုးစီးပွားနှင့် erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုနှင့် ပတ်သက်၍ လက်တွေ့ ၀ န်ဆောင်မှုများအတွက် ၀ ယ်လိုအားတိုးပွားလာသည်နှင့်အမျှလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှုနှင့်ပတ်သက်သည့်ကူးစက်ရောဂါဆိုင်ရာအချက်အလက်များသည်အမျိုးသမီးများနှင့်အမျိုးသားများအတွက်အတော်လေးနည်းပါးသည်။
ပုံစံ အမျိုးသားကျန်းမာရေးနှင့်လူမှုဘဝစစ်တမ်းမှအချက်အလက်များကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာလေ့လာခြင်း၊ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူဆိုင်ရာလေ့လာမှုကိုအမေရိကန်လူကြီးများ 1992 အုပ်စုတွင်လေ့လာနိုင်သည်။
သင်တန်းသားများကို စစ်တမ်းကောက်ယူချိန်တွင် 1749 မှ 1410 မှအသက် 18 အမျိုးသားများနှင့်အမျိုးသား 59 အမျိုးသမီးများအတွက်အမျိုးသားဖြစ်နိုင်ခြေနမူနာ။
ရလဒ်များ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှု (43%) သည်အမျိုးသားများထက်အမျိုးသမီးများပိုမိုပျံ့နှံ့သည် (31%) နှင့်အသက်အရွယ်နှင့်ပညာရေးဆိုင်ရာအောင်မြင်မှုများအပါအဝင်လူ ဦး ရေဆိုင်ရာသွင်ပြင်လက္ခဏာများနှင့်ဆက်စပ်နေသည်။ ကွဲပြားခြားနားသောလူမျိုးရေးအုပ်စုများမှအမျိုးသမီးများသည်မတူညီသောလိင်ဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှုပုံစံများကိုသရုပ်ပြကြသည်။ အမျိုးသားများအကြားခြားနားချက်များမှာသိသိသာသာကွဲပြားသော်လည်းအမျိုးသမီးများနှင့်ယေဘုယျအားဖြင့်တသမတ်တည်းဖြစ်သည်။ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေးချို့တဲ့သောအမျိုးသမီးများနှင့်အမျိုးသားများအကြားလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှု၏အတွေ့အကြုံများသည်ပိုမိုဖြစ်နိုင်သည်။ ထို့အပြင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှုသည်လိင်ဆက်ဆံခြင်းနှင့်အလုံးစုံသုခချမ်းသာရရှိခြင်းတို့တွင်အနှုတ်လက္ခဏာတွေ့ကြုံမှုများနှင့်အလွန်ဆက်စပ်သည်။
လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှုများသည်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒများနှင့်အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးများအားလိင်ဆိုင်ရာတုန့်ပြန်မှုသံသရာနှင့်ဆက်နွယ်သောစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြောင်းလဲမှုများကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။1 လက်တွေ့ ၀ န်ဆောင်မှုများ ၀ ယ်လိုအားမြင့်တက်လာခြင်းနှင့်ဤရောဂါ၏အလားအလာရှိသောသက်ရောက်မှုများအရလူ့ဆက်ဆံရေးနှင့်ဘဝအရည်အသွေးအပေါ်2,3 ရောဂါဒေတာအတော်လေးနည်းပါးဖြစ်ကြသည်။ ရရှိနိုင်သည့်ရပ်ရွာလေ့လာမှုအနည်းငယ်ကို အခြေခံ၍ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှုများသည်လိင်နှစ်မျိုးစလုံးတွင်အလွန်ပျံ့နှံ့နေပြီး၊ 10% မှယောက်ျားမိန်းမများမှ 52% နှင့်အမျိုးသမီးများ 25% အထိ 63% အထိဖြစ်သည်။4-6မက်ဆာချူးဆက်အမျိုးသားအိုမင်းလေ့လာမှုမှအချက်အလက်များ7 (MMAS) က 34.8 မှ 40 အသက်အရွယ်မှယောက်ျားလေးများတွင် 70 နှစ်မှနှစ်များတွင်အသက်၊ ကျန်းမာရေးအခြေအနေနှင့်စိတ်ခံစားမှုဆိုင်ရာလုပ်ဆောင်မှုတို့နှင့်အလွန်ဆက်စပ်မှုရှိသော erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုကိုဖြည့်ဆည်းရန်အလယ်အလတ်ရှိသည်။ Erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုကိုပြည်သူ့ကျန်းမာရေးပြproblemနာအဖြစ်အမျိုးသားအင်စတီကျု၏သဘောတူညီမှုအဖွဲ့မှဖော်ပြခဲ့သည်။8 ဒီရောဂါ၏ပျံ့နှံ့, ပြဌာန်းခွင့်နှင့်အကျိုးဆက်များကိုရည်မှတ်လူ ဦး ရေ -based ဒေတာအတွက်အရေးပေါ်လိုအပ်ချက်ဖော်ထုတ်ခဲ့သည်။ အမျိုးသမီးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှု၏ကူးစက်ရောဂါနှင့်ပတ်သက်ပြီးလူသိနည်းသေးသည်။
လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှုကိုပညာရှင်နှင့်ပြည်သူလူထုကစိတ်ဝင်စားမှုသည်မကြာသေးမီကဒေသများစွာတွင်ဖြစ်ပေါ်တိုးတက်မှုများကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာခဲ့သည်။ ပထမ ဦး စွာယောက်ျားနှင့်မိန်းမတို့တွင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတုန့်ပြန်မှုအာရုံကြောဆိုင်ရာယန္တရားများကိုကျွန်ုပ်တို့နားလည်သဘောပေါက်ခြင်းတွင်အဓိကတိုးတက်မှုများဖြစ်ပွားခဲ့သည်။9- 11 အထီး erectile ရောဂါကုသမှုများအတွက်သိသိသာသာကုထုံးအလားအလာပူဇော်ကြောင်းမူးယစ်ဆေးဝါးများအတန်းသစ်အများအပြားဖော်ထုတ်ခဲ့ကြသည်,12- 14 သည်အခြားအေးဂျင့်များလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒနှင့်အော်ဂဇင်မမှန်များအတွက်အဆိုပြုခဲ့ကြသည်နေစဉ်။15,16 ဤဆေးဝါးများရရှိနိုင်မှုသည်ဤပြproblemsနာများအတွက်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အကူအညီတောင်းခံသောလူနာအရေအတွက်ကိုသိသိသာသာတိုးပွားစေနိုင်သည်။ သင့်လျော်သော ၀ န်ဆောင်မှုပေးခြင်းနှင့်သယံဇာတခွဲဝေခြင်းပုံစံများကိုဖော်ထုတ်ရာတွင်ကူးစက်ရောဂါဆိုင်ရာအချက်အလက်များသိသာထင်ရှားသည့်တန်ဖိုးရှိလိမ့်မည်။ ထို့အပြင်လူ ဦး ရေတွင်ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာသဘောထားများပြောင်းလဲခြင်းနှင့်လူ ဦး ရေအချိုးအစားပြောင်းလဲခြင်းတို့သည်လူမျိုးစုများနှင့်အသက်အရွယ်အလိုက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစိုးရိမ်မှုများကိုပျံ့နှံ့စေသည်။
ယခုလေ့လာမှုသည်အမျိုးသားကျန်းမာရေးနှင့်လူမှုဘဝစစ်တမ်း (NHSLS) မှအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရှိအရွယ်ရောက်ပြီးသူလိင်အပြုအမူလေ့လာမှုမှလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှုဆိုင်ရာအချက်အလက်များကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းဖြင့်ဤပြissuesနာများကိုဖြေရှင်းသည်။17 နမူနာကောက်ယူခြင်း၊ ဒေတာစုဆောင်းခြင်းနှင့်တုန့်ပြန်မှုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းများအားလုံးကိုအလွန်အမင်းထိန်းချုပ်ထားသောအခြေအနေများတွင်ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ဤထူးခြားသောအချက်အလက်အရင်းအမြစ်သည်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပြandနာများနှင့်ကမောက်ကမဖြစ်မှု၊ ကျန်းမာရေးနှင့်လူနေမှုပုံစံစတဲ့ပြောင်းလဲမှုများ၊ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှုကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း NHSLS အချက်အလက်များကို အသုံးပြု၍ လူ ဦး ရေဆိုင်ရာသွင်ပြင်လက္ခဏာများနှင့်ကျန်းမာရေးနှင့်သုခချမ်းသာ၏ညွှန်ကိန်းများအရအခြေခံပျံ့နှံ့မှုနှုန်းကိုတင်ပြထားသည်။17(pp368-374) လက်ရှိလေ့လာမှုသည်ဆန့်ကျင်ဘက်အနေဖြင့်လူ ဦး ရေဆိုင်ရာသွင်ပြင်လက္ခဏာများနှင့်အဓိကအန္တရာယ်အချက်များအတွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှု၏ဆွေမျိုးစွန့်စားမှု (RR) ကိုခန့်မှန်းရန် multivariate နည်းစနစ်များကိုအသုံးပြုသည်။
၁၉၉၂ ခုနှစ်တွင်ပြုလုပ်ခဲ့သည့် NHSLS သည်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုတစ်လွှားရှိအိမ်ထောင်စုများ၌နေထိုင်သောအသက် ၁၈ နှစ်မှ ၅၉ နှစ်ကြားအမျိုးသား ၁၄၁၀ နှင့်အမျိုးသမီး ၁၇၄၉ တို့၏အမျိုးသားဖြစ်နိုင်ခြေနမူနာဖြစ်သည်။ ဒီအသက်အရွယ်မှာလူ ဦး ရေရဲ့ ၉၇ ရာခိုင်နှုန်းခန့် - အမေရိကန်လူ ဦး ရေသန်း ၁၅၀ ခန့်ရှိတယ်။ ၎င်းတွင်စစ်တန်းလျားများ၊ ကောလိပ်ကျောင်းများ၊ အကျဉ်းထောင်များကဲ့သို့သောအုပ်စုရပ်ကွက်တွင်နေထိုင်သူများနှင့်တွေ့ဆုံမေးမြန်းရန်အတွက်အင်္ဂလိပ်စာလုံလုံလောက်လောက်မရှိသူများကိုဖယ်ထုတ်ထားသည်။ နမူနာပြီးစီးမှုနှုန်းသည် ၇၉% ထက်ပိုသည်။ အခြားအရည်အသွေးမြင့်သောနမူနာများ (ဥပမာ US သန်းခေါင်စာရင်းဗျူရို၏လက်ရှိလူ ဦး ရေစစ်တမ်း) မှ NHSLS သည်လူ ဦး ရေ၏အမှန်တကယ်ကိုယ်စားပြုနမူနာကိုထုတ်လုပ်နိုင်ခဲ့သည်ဟုဖော်ပြသည်။ ဖြေဆိုသူတစ် ဦး ချင်းစီကိုအတွေ့အကြုံရှိသောအင်တာဗျူးသူများကလူတွေ့မေးမြန်းခြင်းကိုဖြေကြားသူများကိုလူမှုဂုဏ်သတ္တိများအမျိုးမျိုးနှင့်လိုက်ဖက်ပြီးမိနစ် ၉၀ ပျမ်းမျှတွေ့ဆုံမေးမြန်းခြင်းပြုလုပ်ခဲ့သည်။ နမူနာပုံစံဒီဇိုင်းနှင့်နမူနာနှင့်အချက်အလက်အရည်အသွေးအကဲဖြတ်မှုများအကြောင်းကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်ဆွေးနွေးခြင်းကို Laumann et al မှစာအုပ်တွင်တွေ့ရှိရသည်။17(pp35-73,549-605)
လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှု7dichotomous တုန့်ပြန်ချက်ပစ္စည်းများ, အတိတ် 12 လအတွင်းတစ် ဦး ချင်းစီတိုင်းတာလက္ခဏာသို့မဟုတ်ပြmeasuringနာများ၏ရှိနေခြင်းတိုင်းတာခြင်းသည်နှင့်အညီ, ဒီလေ့လာမှုမှာ indexed ခဲ့သည်။17(p660) တုန့်ပြန်မှုပစ္စည်းများတွင် (1) လိင်အလိုဆန္ဒမရှိခြင်း၊ (2) နှိုးဆွသောအခက်အခဲများ (ဆိုလိုသည်မှာယောက်ျားများတွင်ထုံထိုင်းခြင်းပြ,နာများ၊ အမျိုးသမီးများအတွက်ချောမွေ့မှုအခက်အခဲများ)၊ (3) အထွတ်အထိပ်သို့မဟုတ်သုတ်ရည်လွှတ်ရရှိနိုင်ခြင်း; (4) လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွမ်းဆောင်ရည်နှင့်ပတ်သက်။ စိုးရိမ်ပူပန်မှု, (5) အလွန်လျှင်မြန်စွာအထွor်အထိပ်သို့ရောက်ခြင်း၊ (6) လိင်ဆက်ဆံစဉ်အတွင်းရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနာကျင်မှု; နှင့် (7) သည်လိင်ပျော်ရွှင်မှုမရရှိနိုင်ပါ။ ပြီးခဲ့သည့်3ပစ္စည်းများကိုယခင် 12 လကာလအတွင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတက်ကြွစွာဖြေကြားသူများအားသာမေးမြန်းခဲ့သည်။ အတူတကွယူ, ဤပစ္စည်းများကိုအတွက်ဖြေရှင်းအဓိကပြproblemနာဒေသများဖုံးလွှမ်း စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာရောဂါ၏ရောဂါနှင့်စာရင်းအင်းလက်စွဲစာအုပ်, စတုတ္ထ Edition ကို1 လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှု၏ခွဲခြား။ အထူးသဖြင့်မျက်နှာချင်းဆိုင်တွေ့ဆုံမေးမြန်းခြင်းများတွင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှုများအကြောင်းကိုယ်တိုင်အစီရင်ခံတင်ပြခြင်းများသည်လူမှုရေးအကျပ်အတည်းနှင့်ပတ်သက်သောပုဂ္ဂိုလ်ရေးစိုးရိမ်မှုများမှပေါ်ပေါက်လာသောဘက်လိုက်မှုများကိုသတင်းပို့ခြင်းဖြစ်သည်။ ထို့အပြင်ဖြေဆိုသူများ၏ထူးခြားသောဂုဏ်သတ္တိများနှင့်ဆက်စပ်သောသတင်းပို့ခြင်းကိုစနစ်တကျဘက်လိုက်မှုရှိနိုင်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ သက်ကြီးရွယ်အိုများ၊ ပညာတတ်အမျိုးသမီးများ (သို့) ဟစ်စပန်းနစ်အမျိုးသားလူငယ်များသည်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပြreportနာများကိုအစီရင်ခံရန်တွန့်ဆုတ်နိုင်သည်။ အင်တာဗျူးနေစဉ်အတွင်းသီးသန့်တည်ရှိမှုမရှိခြင်းသည်လည်းသတင်းပို့ခြင်းကိုအားနည်းစေသည်။ သို့သော်ဆန်းစစ်ခြင်းများပြုလုပ်ထားခြင်း (ဤနေရာတွင်အစီရင်ခံခြင်းမရှိပါ) NHSLS ၏အချက်အလက်များတွင်လျှို့ဝှက်ချက်ကင်းမဲ့မှုကြောင့်ဘက်လိုက်မှုများကိုတင်ပြခြင်းသည်အရေးမကြီးပါ။17(pp564-570)
တစ် ဦး ချင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလက္ခဏာများ၏ syndromal စပျစ်သီးပြွတ်အကဲဖြတ်ရန်တစ် ဦး ကငုပ်လျှိုးနေလူတန်းစားခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ (LCA) ကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။ ငုပ်လျှိုးနေလူတန်းစားခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ latent အတန်းသို့အမျိုးအစားဒေတာအုပ်စုဖွဲ့များအတွက်ကောင်းစွာသင့်လျော်တဲ့စာရင်းအင်းနည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်18,19 နှင့်ထိုကဲ့သို့သောရောဂါရှာဖွေရေးစနစ်များကိုအကဲဖြတ်အဖြစ်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ applications များများစွာရှိပါတယ်20- 23 နှင့်ရောဂါဒေတာကိုအသုံးပြု။ epidemiologic ခန့်မှန်း၏မျိုးဆက်။24,25 latent class ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုတွင်နှစ် ဦး နှစ်ဖက်သီးသန့်သီးခြားအတန်းများအနေဖြင့်သတ်မှတ်ထားသော latent variable သည်ထင်ရှားသောအမျိုးအစားခွဲခြားခြင်းရှိမရှိစစ်ဆေးသည်။ ဤနည်းလမ်းကိုအသေးစိတ်ဆွေးနွေးခြင်းကိုစာရေးသူ၏တောင်းဆိုချက်အရရရှိနိုင်ပါသည်။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှု၏ရောဂါများအတွက်ရောဂါရှာဖွေရေးစံသတ်မှတ်ချက်များတွင်ရှုပ်ထွေးသောလက္ခဏာများပါဝင်သောကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည် LCA ကိုအမျိုးအစားများအဖြစ်အုပ်စုဖွဲ့ရန်အသုံးပြုခဲ့သည်။ သို့ဖြစ်ရာဤအမျိုးအစားသည်အမေရိကန်လူ ဦး ရေတွင်တွေ့ရသောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှုအတွက်ရောဂါလက္ခဏာများကိုကိုယ်စားပြုပြီးပြန့်နှံ့မှုနှင့်ရောဂါလက္ခဏာများကိုဖော်ပြသည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည်ယခင် 1 လအတွင်းအနည်းဆုံး 12 လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များကိုအစီရင်ခံသောဖြေဆိုသူများကိုသာခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခဲ့သည်။ ဤကာလအတွင်းလိင်မလှုပ်မရှားသောဖြေဆိုသူများကိုဖယ်ထုတ်လိုက်သည်။ ဖယ်ထုတ်ထားသူများသည်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပြproblemsနာများကြောင့်လိင်ကိုရှောင်ကြဉ်ခြင်းကြောင့်ဤလုပ်ထုံးလုပ်နည်းသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ရလဒ်များကိုကန့်သတ်ထားနိုင်သည် သို့သော်ဤလုပ်ထုံးလုပ်နည်းသည်တုန့်ပြန်ဖြေသူတစ် ဦး စီမှ3ပစ္စည်းများကိုလိင်တက်ကြွသောဖြေဆိုသူများမှသာမေးသောကြောင့်ရောဂါလက္ခဏာများအားလုံးကိုဖြေဆိုရန်လိုအပ်သည်။ 139 အမျိုးသားများနှင့် 238 အမျိုးသမီးများအားဤအခြေခံအားဖြင့်ဖယ်ထုတ်လိုက်သည်။ ဖယ်ထုတ်ခံထားရသောအမျိုးသားများသည်တစ်ကိုယ်ရေဘဝနှင့်ပညာရေးအဆင့်နိမ့်သူများပိုများသည်။ လိင်ဆက်ဆံမှုအားနည်းသောအမျိုးသားများယေဘုယျအားဖြင့်ရောဂါလက္ခဏာများနှုန်းမြင့်တက်လာသည်နှင့်အမျှ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှု၏ကျဆင်းမှုကိုခန့်မှန်းတွက်ချက်မှုကိုလျှော့ချလိမ့်မည်ဟုကျွန်ုပ်တို့မျှော်လင့်ပါသည်။ ချန်လှပ်ထားသည့်အမျိုးသမီးများသည်အသက်ကြီးသူများနှင့်တစ်ကိုယ်ရေနေလေ့ရှိသည်။ ဤအမျိုးသမီးများအားဖယ်ထုတ်ခြင်းသည်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှု၏ပျံ့နှံ့မှုကိုကျွန်ုပ်တို့၏ခန့်မှန်းချက်များကိုဘက်လိုက်စေနိုင်သည်။ ဤအမျိုးသမီးများသည်နှုန်းထားများကိုနိမ့်ကျစွာတင်ပြလေ့ရှိကြသည်။
ဒီလေ့လာမှုမှာဖျော်ဖြေဆန်းစစ်ခြင်းများပြုလုပ်ထားခြင်းထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးနှင့် multinomial ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးဆုတ်ယုတ်အသုံးပြုခြင်းအားဖြင့်ဖန်ဆင်းခဲ့သည်။ လူ ဦး ရေဆိုင်ရာသွင်ပြင်လက္ခဏာများအရရောဂါလက္ခဏာများပျံ့နှံ့မှုကိုအကဲဖြတ်ရန်ကျွန်ုပ်တို့သည်ရောဂါလက္ခဏာတစ်ခုစီအတွက်ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးအစီအစဉ်များကိုပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ဤချဉ်းကပ်မှုကချိန်ညှိထားသောအလေးသာမှုအချိုး (ORs) ကိုထုတ်လုပ်သည်။ ၎င်းသည်လူမှုရေးအုပ်စု (ဥပမာ - ဘယ်တော့မှလက်မထပ်ရသေးသော) အဖွဲ့ဝင်များသည်အခြားလူ ဦး ရေဆိုင်ရာသွင်ပြင်လက္ခဏာများကိုထိန်းချုပ်နေစဉ်ရည်ညွှန်းအုပ်စု (ဥပမာလက်ရှိလက်ထပ်) ၏လက္ခဏာများကိုဖော်ပြခဲ့သည်။ လူ ဦး ရေဆိုင်ရာသွင်ပြင်လက္ခဏာများတွင်ဖြေကြားသူ၏အသက်၊ အိမ်ထောင်ရေးအခြေအနေ၊ ပညာရေးအဆင့်နှင့်လူမျိုးနှင့်လူမျိုးတို့ပါဝင်သည်။ ဤအဝိသေသလက္ခဏာများကိုထိန်းချုပ်နေစဉ် Next ကိုကျနော်တို့အန္တရာယ်အချက်များ3အစုံအဘို့အ multinomial ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေး regressions သုံးပြီးချိန်ညှိ ORs တစ် ဦး ချင်းစီတစ် ဦး nonnested ထုံးစံ၌သီးခြားစီလုပ်ပါတယ်။ ကျန်းမာရေးနှင့်လူနေမှုပုံစံစသည့်ဆက်စပ်သောအန္တရာယ်အချက်များတွင်အရက်သုံးစွဲခြင်း၊ လိင်မှတဆင့်ကူးစက်သောရောဂါများ (STDs) ကိုကြိုတင်ကျုံ့ခြင်း၊ ဆီးလမ်းကြောင်းရောဂါလက္ခဏာများ၊ အရေဖျားလှီးခြင်း၊ ကျန်းမာရေးအခြေအနေနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာသို့မဟုတ်စိတ်ဖိစီးမှုနှင့်ဆိုင်သောပြproblemsနာများအတွေ့အကြုံများပါဝင်သည်။ လူမှုအဆင့်အတန်းပြောင်းလဲမှုများတွင် ၀ င်ငွေအဆင့်ပြောင်းလဲခြင်းနှင့်စံသတ်မှတ်ထားသောတိမ်းညွတ်မှုတို့ပါဝင်ပြီးဖြေကြားသူများ၏လိင်အပေါ်ထားရှိသည့်လစ်ဘရယ်သို့မဟုတ်ရှေးရိုးဆန်သောသဘောထားများဖြင့်ရည်ညွှန်းသည် လိင်မှုဆိုင်ရာအတွေ့အကြုံနှင့်ဆက်နွှယ်သည့်အန္တရာယ်အချက်များတွင်တစ်သက်တာလိင်မိတ်ဖက်အရေအတွက်၊ လိင်ကြိမ်နှုန်း၊ ဖြေဆိုသူများကလိင်အကြောင်း၊ တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းကြိမ်နှုန်း၊ လိင်တူချင်းဆက်ဆံမှုနှင့်အလားအလာရှိသောစိတ်ထိခိုက်ဖွယ်ရာအဖြစ်အပျက်များဖြစ်သည့်အရွယ်ရောက်ကလေးသူငယ်အဆက်အသွယ်၊ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနှောင့်ယှက်ခြင်းနှင့်ကိုယ်ဝန်ဖျက်ချခြင်း။ နောက်ဆုံးအနေနဲ့ငါတို့ကြိုတင်ခန့်မှန်း variable တွေကိုအဖြစ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှုအမျိုးအစားများကိုအသုံးပြုကြောင်းထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေး Regression အစုတခုပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ဤရွေ့ကားမော်ဒယ်များကမောက်ကမဖြစ်မှုအမျိုးအစားအတွေ့အကြုံနှင့်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရနှင့်ဆက်ဆံရေးအတွက်ကျေနပ်မှုဖြစ်ခြင်းပါဝင်သောအရည်အသွေး -of ဘဝကို concomitants အကြားဆက်စပ်မှုတိုင်းတာ။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ရလဒ်များအနေဖြင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှု၏ရလဒ်အဖြစ်ဆက်စပ်မှုမရှိကြောင်းတွေ့ရှိရသည်။ ငုပ်လျှိုးနေလူတန်းစားခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာအများဆုံးဖြစ်နိုင်ခြေငုပ်လျှိုးနေဖွဲ့စည်းပုံခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာသုံးပြီးဖျော်ဖြေခဲ့ကြသည်။26 အားလုံးထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေး Regression STATA ဗားရှင်း 5.0 ကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။27 variable ဆောက်လုပ်ရေး, LCA နည်းလမ်းများနှင့်ဒေတာအရည်အသွေးနှင့်ပတ်သက်။ သတင်းအချက်အလက်ရေးသားသူထံမှရရှိနိုင်ပါသည်။
NHSLS အချက်အလက်များကိုအသုံးပြုခြင်းသည်အရွယ်ရောက်ပြီးသောအမျိုးသမီးများနှင့်အမျိုးသားများအတွက်အမျိုးသားပြန့်ပွားမှုခန့်မှန်းတွက်ချက်မှုကိုတွက်ချက်ရန်ခွင့်ပြုသည်။ အရေးပါသောရောဂါလက္ခဏာများနှင့်ပတ်သက်သည့် NHSLS ၏အချက်အလက်များသည်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှုကိုလက်တွေ့ကျကျအဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်ကိုမဖော်ပြနိုင်သော်လည်း ၄ င်းတို့၏ပျံ့နှံ့မှုသည်အမေရိကန်လူ ဦး ရေအကြား၎င်းတို့၏အတိုင်းအတာနှင့်ကွဲပြားခြားနားသောဖြန့်ဖြူးမှုနှင့်ပတ်သက်သောအရေးကြီးသောသတင်းအချက်အလက်များကိုပေးသည်။ စားပွဲတင် 1 နှင့် စားပွဲတင်2ရွေးချယ်ထားသောလူ ဦး ရေဆိုင်ရာသွင်ပြင်လက္ခဏာများအရပျံ့နှံ့နေသောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပြproblemsနာများကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာပါ။ အမျိုးသမီးများအတွက်၊ ချောဆီချို့တဲ့သည်ဟုအစီရင်ခံသူများ မှလွဲ၍ လိင်ဆိုင်ရာပြofနာများသည်အသက်အရွယ်ကြီးလာသည်နှင့်အမျှကျဆင်းလေ့ရှိသည်။ အမျိုးသားများအတွက်အသက်အရွယ်ကြီးထွားမှုသည်စိုက်ထူခြင်းပြsexနာများနှင့်လိင်ဆန္ဒမပါ ၀ င်ခြင်းနှင့်ဆက်စပ်မှုရှိသည်။ ယောက်ျားနှင့်သက်တမ်းအရင့်ဆုံးအသက်အရွယ် (50-59 နှစ်များ) သည်စိုက်ထူခြင်းပြproblemsနာများ (3% ယုံကြည်မှုကြားကာလ [CI]၊ 95-1.8) နှင့်တွေ့ကြုံမှုနည်းပါးပြီးလိင်ဆန္ဒပြင်းပြမှုနည်းပါးခြင်း (7.0% CI, 95-1.6) ) 5.4 အသက် 18 နှစ်များရှိယောက်ျားများနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါက။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပြproblemsနာများ၏ပျံ့နှံ့မှုသည်လည်းအိမ်ထောင်ရေးအခြေအနေတွင်သိသိသာသာကွဲပြားသည်။ လက်မထပ်မီနှင့်လက်မထပ်မီ (ကွာရှင်းပြတ်စဲ၊ မုဆိုးမနှင့်ခွဲနေခြင်း) အခြေအနေများသည်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပြproblemsနာများနှင့်ကြုံတွေ့ရနိုင်သည့်မြင့်မားသောအန္တရာယ်နှင့်ဆက်စပ်နေသည်။ လက်မထပ်ရသေးသောအမျိုးသမီးများသည်အကြမ်းဖျင်းအားဖြင့် 29 အဆိုးရွားဆုံးသောပြareနာများ (112% CI, 95-1.0 နှင့် 2.1-1.2 အသီးသီး) နှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစိုးရိမ်စိတ်များ (2.3% CI, 95-1.0 နှင့် 2.4-1.1, အသီးသီး) နှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစိုးရိမ်စိတ်များ (2.4% CI, XNUMX-XNUMX နှင့် XNUMX-XNUMX) အသီးသီးသည်အိမ်ထောင်သည်အမျိုးသမီးများဖြစ်ကြသည်။ အလားတူစွာ၊ လက်မထပ်ရသေးသောအမျိုးသားများသည်အိမ်ထောင်သည်အမျိုးသားများထက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှုလက္ခဏာများအတွက်သိသိသာသာပိုမိုမြင့်မားသောနှုန်းထားများကိုတင်ပြကြသည်။ ထို့ကြောင့်အိမ်ထောင်သည်အမျိုးသမီးများနှင့်အမျိုးသားများသည်လက်မထပ်ရသေးသောသူများထက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလက္ခဏာများခံစားရနိုင်ခြေနည်းပါးသည်။
စားပွဲတင် 1 ။ လူ ဦး ရေဆိုင်ရာလက္ခဏာများ (အမျိုးသမီးများ) မှကမောက်ကမဖြစ်မှုပစ္စည်းများပျံ့နှံ့မှု *
အကြီးစား View | စားပွဲတင် Save | ဒေါင်းလုပ်လျှော (.ppt)
စားပွဲတင်2။ လူ ဦး ရေအချိုးအစားအရသိက္ခာမရှိသည့်ပစ္စည်းများ (ယောက်ျား) များပျံ့နှံ့မှု *
မြင့်မားသောပညာရေးဆိုင်ရာအောင်မြင်မှုသည်လိင်နှစ်မျိုးစလုံးအတွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပြproblemsနာများနှင့်သက်ဆိုင်သည်။ ဤကွဲပြားခြားနားမှုများကိုအထက်တန်းကျောင်းဒီပလိုမာမရှိသောအမျိုးသမီးများနှင့်ကောလိပ်ဘွဲ့ရရှိထားသူများအကြားအထူးသဖြင့်ထင်ရှားသည်။ အခြားလူ ဦး ရေဆိုင်ရာသွင်ပြင်လက္ခဏာများကိုထိန်းချုပ်သည့်အနေဖြင့်၊ ကောလိပ်မှဘွဲ့ရသောအမျိုးသမီးများသည်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒ (95% CI, 0.3-0.8)၊ အော်ဂဇင်ရသည့်ပြproblemsနာများ (95% CI, 0.3-0.7)၊ CI, 95-0.3) နှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစိုးရိမ်စိတ် (1.0% CI, 95-0.3) သည်အထက်တန်းကျောင်းမှဘွဲ့မရသောအမျိုးသမီးများဖြစ်သည်။ ယောက်ျားကောလိပ်ဘွဲ့ရများသည်သုံးပုံနှစ်ပုံသာ (1.0% CI, 95-0.4) သည်အမြင့်ဆုံးအထိရောက်ရှိနိုင်ပြီး၊ ထက်ဝက်ခန့်သည်မနှစ်သက်ဖွယ်ရာလိင် (1.0% CI, 95-0.2) နှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစိုးရိမ်ပူပန်မှုများကိုဖော်ပြနိုင်ဖွယ်ရှိသည် (0.9% CI, 95-) အထက်တန်းကျောင်းဒီပလိုမာမရှိသောလူများထက် 0.3) ။ ယေဘုယျအားဖြင့်ပညာရေးနိမ့်ကျသောအမျိုးသမီးများနှင့်အမျိုးသားများသည်ပျော်ရွှင်ဖွယ်ကောင်းသောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတွေ့အကြုံများနှင့်လိင်မှုဆိုင်ရာစိုးရိမ်မှုများကိုတိုးပွားစေသည်။
လူမျိုးနှင့်လူမျိုးစုနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပြproblemsနာများအကြားဆက်နွယ်မှုမှာ ပို၍ ကွဲပြားသည်။ လူမည်းအမျိုးသမီးများသည်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒနိမ့်ကျမှုနှုန်းမြင့်မားလေ့ရှိပြီးအနက်ရောင်အမျိုးသမီးများထက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနာကျင်မှုခံစားရလေ့ရှိသည့်အဖြူရောင်အမျိုးသမီးများနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်အပျော်အပါးနည်းပါးသည်။ ဟစ်စပန်းနစ်အမျိုးသမီးများသည်ဆန့်ကျင်ဘက်အနေဖြင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပြproblemsနာများနှုန်းနိမ့်ကျနေကြောင်းအစီရင်ခံကြသည်။ အမျိုးသားများအကြားကွာခြားချက်များသည်သိသိသာသာမဟုတ်သော်လည်းအမျိုးသမီးများကြုံတွေ့ရသည့်အရာနှင့်ယေဘုယျအားဖြင့်တူညီသည်။ အမှန်မှာလူမျိုးနှင့်လူမျိုးတို့၏သက်ရောက်မှုများသည်လိင်နှစ်မျိုးစလုံးတွင်အတော်အတန်ကျိုးနွံသော်လည်း၊ လူမည်းများသည်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပြysနာများအဖြစ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပြproblemsနာများဖြစ်ပွားခြင်းနည်းသော်လည်းလူမည်းများသည်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပြproblemsနာများပိုမိုဖြစ်ပွားနိုင်ခြေရှိသည်။
LCA ၏ရလဒ်များသည်တစ် ဦး ချင်းရောဂါလက္ခဏာများထက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှုအမျိုးအစားများနှင့်သက်ဆိုင်သောအန္တရာယ်အချက်များနှင့်အရည်အသွေးရှိခြင်းနှင့်သက်ဆိုင်သည့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာရန်ခွင့်ပြုသည်။ အတွက်တင်ပြဆန်းစစ်ခြင်းများပြုလုပ်ထားခြင်း စားပွဲတင် 3, စားပွဲတင်4နှင့် စားပွဲတင်5တစ် ဦး ချင်းရောဂါလက္ခဏာများအစား LCA ၏ရလဒ်များကိုအသုံးပြုပါ။ ဤရလဒ်သည်ရောဂါလက္ခဏာများအရရောဂါလက္ခဏာများစုစည်းခြင်းကိုအမျိုးသမီးများသာမကအမျိုးသားများအတွက်အမျိုးအစား ၄ မျိုးဖြင့်ကိုယ်စားပြုနိုင်သည်ဟုဖော်ပြသည်။ ငုပ်လျှိုးနေသည့်လူတန်းစားခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုကအတန်းတစ်ခုစီ၏အရွယ်အစားကိုစုစုပေါင်းနမူနာ၏အချိုးအစားအဖြစ်ခန့်မှန်းသည်။ ရလဒ်မှာအမေရိကန်လူ ဦး ရေတွင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှုအမျိုးအစားများနှင့်သက်ဆိုင်သည်။ နောက်ဆုံးအနေဖြင့် LCA သည်အတန်းတစ်ခုစီ၏ရောဂါလက္ခဏာများကိုခွဲခြားသတ်မှတ်ပြီးထိုအတန်းထဲမှဖြေဆိုသူများသည်ပေးထားသောလက္ခဏာကိုပြသနိုင်ခြင်းအားဖြင့်သုတေသီများအားအမျိုးအစားတစ်ခုချင်းစီ၏သွင်ပြင်လက္ခဏာများနှင့်ပတ်သက်သောသတင်းအချက်အလက်များကိုပေးသည်။ လက်တွေ့ရောဂါနှင့်ညီမျှသော်လည်းဤချဉ်းကပ်မှုသည်လိင်ဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှုကိုစာရင်းအင်းဆိုင်ရာကိုယ်စားပြုမှုကိုပေးသည်။
စားပွဲတင်3။ စွန့်စားမှုအချက်များ (အမျိုးသမီးများ) ကလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှု၏ငုပ်လျှိုးအတန်းများ *
စားပွဲတင်4။ အန္တရာယ်အချက်များ (အမျိုးသားများ) မှလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှု၏လျှို့ဝှက်အတန်းများ *
စားပွဲတင်5။ လျှို့ဝှက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှု၏ငုပ်လျှိုးနေအတန်းများကအရည်အသွေး -of ဘဝကအတူတူပါပဲ *
အမျိုးသမီးများအတွက် LCA မှဖော်ထုတ်ထားသော4အမျိုးအစားများသည်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှု၏အဓိကရောဂါများနှင့်အကြမ်းအားဖြင့်ကိုက်ညီသည်။ စိတ်ရောဂါ၏ရောဂါနှင့်စာရင်းအင်းလက်စွဲစာအုပ်, စတုတ္ထထုတ်ဝေ.1 ၎င်းတို့တွင်ထိခိုက်မှုမရှိသောအုပ်စု (58% ပျံ့နှံ့မှု)၊ အနိမ့်လိင်အလိုဆန္ဒအမျိုးအစား (22% ပျံ့နှံ့မှု)၊ နှိုးဆွမှုပြproblemsနာများ (14% ပျံ့နှံ့မှု) အမျိုးအစားနှင့်လိင်နာကျင်မှုခံစားနေရသောအုပ်စုတစ်စု (7% ပျံ့နှံ့မှု) တို့ပါဝင်သည်။ အလားတူစွာအမျိုးသားအများစု (70% ပျံ့နှံ့မှု) သည်ထိခိုက်မှုမရှိသောလူ ဦး ရေဖြစ်သည်။ ကျန်ရှိနေသေးသောအမျိုးအစားများတွင်အချိန်မတန်မီသုက်လွှတ်ခြင်း (21% ပျံ့နှံ့မှု)၊ erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှု (5% ပျံ့နှံ့မှု) နှင့်အနိမ့်လိင်ဆန္ဒ (5% ပျံ့နှံ့မှု) တို့ပါဝင်သည်။ ယေဘူယျအားဖြင့် LCA ၏ရလဒ်များအရအမျိုးသမီးများသည်အမျိုးသားများထက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှု၏ပျံ့နှံ့မှုနှုန်း (43% နှင့် 31%) ဖြစ်သည်။
စားပွဲတင်3နှင့် စားပွဲတင်4လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှုအမျိုးအစားများအပေါ် multinomial ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေး Regression တင်ပြ။ Adjustments ORs သည်သတ်မှတ်ထားသောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှုအမျိုးအစားကိုကြုံတွေ့ရနိုင်သည့်အခြားအန္တရာယ်လက္ခဏာများကိုဖော်ပြပြီး၊ အခြားလက္ခဏာများကိုထိန်းချုပ်နေစဉ်၊ ကျန်းမာရေးနှင့်လူနေမှုပုံစံစတဲ့အန္တရာယ်အချက်များနဲ့ပတ်သက်ပြီးစိတ်ခံစားမှု (သို့) စိတ်ဖိစီးမှုနှင့်ဆိုင်သောပြproblemsနာများကိုကြုံတွေ့ရသူများသည်အမျိုးအစားတစ်ခုချင်းစီတွင်သတ်မှတ်ထားသောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလုပ်မဖြစ်ခြင်းများကိုပိုမိုကြုံတွေ့ရနိုင်သည်။ ဆန့်ကျင်ဘက်အနေဖြင့်ကျန်းမာရေးပြproblemsနာများသည်အမျိုးသမီးများနှင့်အမျိုးသားများအတွက်ကွဲပြားခြားနားပါသည်။ ကျန်းမာရေးမကောင်းသောအမျိုးသားများသည်လိင်ဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှုအမျိုးအစားအားလုံးအတွက်အန္တရာယ်ရှိသည်။ ဤအချက်သည်အမျိုးသမီးများအတွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနာကျင်မှုနှင့်သာသက်ဆိုင်သည်။ ဆီးလမ်းကြောင်းလက္ခဏာများရှိခြင်းသည်လိင်ဆိုင်ရာလုပ်ဆောင်မှုကိုသာသက်ရောက်မှုရှိသည် (ဥပမာ - အမျိုးသမီးများအတွက်နှိုးဆွခြင်းနှင့်နာကျင်မှုရောဂါများသို့မဟုတ်အမျိုးသားများအတွက် erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှု) ။ နောက်ဆုံးအနေဖြင့် STD ရှိခြင်း၊ အသင့်အတင့်မှမြင့်မားစွာအရက်သေစာသောက်သုံးခြင်းနှင့်အရေဖျားလှီးခြင်းသည်ယေဘုယျအားဖြင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှုကိုတိုးပွားစေနိုင်သည်။
လူပုဂ္ဂိုလ်တစ် ဦး ချင်း၏လူမှုစီးပွားရေးနှင့်အခြားလူပုဂ္ဂိုလ်များနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်စံသတ်မှတ်ချက်အနေအထားကိုတိုင်းတာသောလူမှုအဆင့်အတန်းပြောင်းလဲမှုများသည်လူမှုယဉ်ကျေးမှုအနေအထားသည်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလုပ်ဆောင်မှုအပေါ်မည်သို့သက်ရောက်မှုရှိသည်ကိုအကဲဖြတ်သည်။ စီးပွားရေးအခြေအနေပိုမိုဆိုးရွားလာခြင်းအိမ်ထောင်စုဝင်ငွေကျဆင်းခြင်းကြောင့်ရည်ညွှန်းသည်များသောအားဖြင့်အမျိုးသမီးများအတွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှုအမျိုးအစားအားလုံးအတွက်အန္တရာယ်ကျိုးနွံစွာတိုးမြှင့်ခြင်းနှင့်ဆက်စပ်နေသော်လည်းအမျိုးသားများအတွက် erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုသာဖြစ်သည်။ ပုံမှန်တိမ်းညွတ်မှုသည်အမျိုးသမီးများအတွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှုအပေါ်သက်ရောက်မှုမရှိပါ။ လိင်နှင့် ပတ်သက်၍ လစ်ဘရယ်ဆန်သောစိတ်ထားရှိသည့်အမျိုးသားများအနေဖြင့်မူအချိန်မတန်မီသုက်လွှတ်မှု (၁၃၅% CI၊ ၁-၂-၂.၅) ကိုတွေ့ကြုံရဖွယ်ရှိသည်။
နောက်ဆုံးအနေဖြင့်လိင်အတွေ့အကြုံ၏ကဏ္ various အသီးသီးသည်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှုကိုပိုမိုဆိုးရွားစေသည်။5ထက်ပိုသောတစ်သက်တာလက်တွဲဖော်များနှင့်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းအလေ့အကျင့်များရှိခြင်းအားဖြင့်ဖော်ပြသောလိင်ဆိုင်ရာသမိုင်းသည်အမျိုးသမီးများနှင့်အမျိုးသားများအတွက်ဆိုးရွားသောအန္တရာယ်များမဖြစ်ပေါ်စေပါ။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှု (သို့) အကျိုးစီးပွားနိမ့်ကျသည့်အမျိုးသမီးများသည်လိင်ဆန္ဒပြင်းပြမှုနည်းခြင်းနှင့်နှိုးဆွခြင်းမမှန်ခြင်းများအတွက်အန္တရာယ်မြင့်မားသည်။ အမျိုးသားများသည်အလားတူအသင်းအဖွဲ့များကိုမပြသပါ။ စိတ်ဒဏ်ရာရရှိနိုင်သောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဖြစ်ရပ်များ၏သက်ရောက်မှုသည်အမျိုးသမီးများနှင့်အမျိုးသားများအတွက်သိသိသာသာကွဲပြားခြားနားပါသည်။ တူညီသောလိင်လုပ်ဆောင်မှုကိုအစီရင်ခံသည့်အမျိုးသမီးဖြေဆိုသူများသည်အမျိုးသားများဖြစ်သည့်တိုင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှုအတွက်ပိုမိုမြင့်မားသောအန္တရာယ်မရှိပါ။ တူညီသောလိင်လုပ်ဆောင်မှုကိုတင်ပြသောအမျိုးသားများသည်မရှိသည်ယောက်ျားများထက်အချိန်မတန်မီသုက်လွှတ်ခြင်း (95% CI, 1.2-3.9) နှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒအနိမ့် (95% CI, 1.1-5.7) ကိုကြုံတွေ့ရဖွယ်ရှိသည်။ အရွယ်ရောက်ကလေးများထိတွေ့ဆက်ဆံခြင်း (သို့) အတင်းအဓမ္မလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအဆက်အသွယ်များမှတဆင့်လိင်အကြမ်းဖက်မှုများကိုကြုံတွေ့ခံစားခဲ့ရသောအမျိုးသမီးများတွင်နှိုးဆွခြင်းရောဂါသည်အလွန်ဆက်စပ်မှုရှိသည်။ အလားတူစွာအရွယ်ရောက်ပြီးသူ - ကလေးသူငယ်အဆက်အသွယ်ခံရသောသားယောက်ျားများသည်3အကြိမ် erectile dysfunction (95% CI, 1.5-6.6) နှင့်2အကြိမ်များမှာအချိန်မတန်မီသုက်လွှတ်ခြင်း (95% CI, 1.2-2.9) နှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒနိမ့်ကျခြင်းကိုကြုံတွေ့ရဖွယ်ရှိသည် (95% CI, 1.1-4.6) အရွယ်ရောက်ပြီးကလေးသူငယ်အဆက်အသွယ်၏သားကောင်များမဟုတ်သူများထက်။ နောက်ဆုံးအနေဖြင့်အမျိုးသမီးများအားလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစော်ကားသောအမျိုးသားများသည် 312 အကြိမ် erectile dysfunction (95% CI, 1.0-12.0) ကိုအစီရင်ခံရန်အလားအလာရှိသည်။ အမှန်မှာ၊ စိတ်ဒဏ်ရာရရှိသောလိင်မှုကိစ္စများသည်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလုပ်ငန်းဆောင်တာများအပေါ်များစွာအကျိုးသက်ရောက်သည်။ အချို့သောဖြစ်ရပ်များသည်မူရင်းအဖြစ်အပျက်ဖြစ်ပျက်မှုထက် ကျော်လွန်၍ ဖြစ်သည်။
အရည်အသွေး -of ဘဝကို Concomitants
လိင်ဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှု၏အတွေ့အကြုံသည်မကျေနပ်သောပုဂ္ဂိုလ်ရေးအတွေ့အကြုံများနှင့်ဆက်ဆံရေးများစွာနှင့်အလွန်ဆက်စပ်သည်။ စားပွဲတင်5လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှုအမျိုးအစားများ၏ဆက်စပ်မှုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမိတ်ဖက်များနှင့်ယေဘုယျပျော်ရွှင်မှုခံစားချက်တွေကိုနှင့်အတူစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်ကျေနပ်မှုနှင့်အတူမီးမောင်းထိုးပြ။ သို့သော်အရည်အသွေးကောင်းမွန်သောဘဝညွှန်းကိန်းများသည်လိင်ဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှု၏တစ်ပြိုင်နက်တည်းရလဒ်များဖြစ်သောကြောင့်ကျိုးကြောင်းဆက်နွှယ်မှုမရှိဟုမယူဆသင့်ပါ။ အမျိုးသမီးများအတွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှုအမျိုးအစားအားလုံး - လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒနည်းခြင်း၊ နှိုးဆွမှုရောဂါ၊ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနာကျင်မှု - သည်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျေနပ်မှုနိမ့်ကျခြင်းနှင့်ပျော်ရွှင်မှုနည်းပါးခြင်းတို့ဖြင့်ခိုင်မာသောအပြုသဘောဆောင်သောပေါင်းသင်းမှုရှိသည်။ အမျိုးသမီးများကဲ့သို့ပင် erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုနှင့်လိင်ဆန္ဒပြင်းပြမှုနည်းပါးသောအမျိုးသားများသည်ဘ ၀ ၏အရည်အသွေးကိုကျဆင်းစေသော်လည်း၊ အချုပ်အားဖြင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှု၏အတွေ့အကြုံသည်ယေဘုယျအားဖြင့်အရည်အသွေးညံ့ဖျင်းခြင်းနှင့်ဆက်စပ်သည်။ သို့သော်ဤဆိုးကျိုးများမှာအမျိုးသားများထက်အမျိုးသမီးများအတွက်ပိုမိုကျယ်ပြန့်ပြီးပိုမိုပြင်းထန်ဖွယ်ရှိသည်။ အကူအညီရှာဖွေသည့်အပြုအမူကိုစစ်ဆေးသည့်အနေဖြင့် (ဤတွင်ဖော်ပြထားခြင်းမရှိသော်လည်းခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းကိုတောင်းခံ။ ရနိုင်သည်) ကျွန်ုပ်တို့သည်ဤဆင်းရဲဒုက္ခခံစားနေရသောအမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးများ၏ 10% နှင့် 20% သည်သူတို့၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပြforနာများအတွက်ဆေးကုသမှုခံယူကြောင်းတွေ့ရှိရသည်။
အသက်အရွယ်ကဲ့သို့သောလူ ဦး ရေဆိုင်ရာအချက်များသည်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအခက်အခဲများအထူးသဖြင့် erectile dysfunction ဖြစ်သည်။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပြproblemsနာများသည်ငယ်ရွယ်သောအမျိုးသမီးများနှင့်လူကြီးများတွင်အများဆုံးဖြစ်သည်။ အများအပြားကွဲပြားသောအချက်များသည်ဤ differential ကိုနှုန်းထားများကိုရှင်းပြလိမ့်မည်။ ငယ်ရွယ်သောအမျိုးသမီးများသည်တစ်ကိုယ်ရေဘဝများများစားစားရှိနိုင်သည့်အတွက်သူတို့၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုများတွင်မိတ်ဖက်လည်ပတ်မှုနှုန်းမြင့်မားခြင်းနှင့်ရံဖန်ရံခါလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမလှုပ်ရှားနိုင်ခြင်းများပါဝင်သည်။ ဤမတည်ငြိမ်မှုသည်အတွေ့အကြုံမရှိခြင်းနှင့်အတူစိတ်ဖိစီးမှုများသောလိင်ဆက်ဆံမှုကိုဖြစ်ပေါ်စေပြီးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနာကျင်မှုနှင့်စိုးရိမ်မှုများအတွက်အခြေခံဖြစ်သည်။ လူငယ်များလည်းအလားတူထိခိုက်မှုမရှိပါ။ သက်ကြီးရွယ်အိုများသည်စိုက်ထူမှုကိုထိန်းသိမ်းရန် (သို့) ရရှိရန်နှင့်လိင်ကိုစိတ်မ ၀ င်စားရန်အခက်အခဲပိုများနိုင်သည်။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်ဝင်စားမှုနည်းပါးခြင်းနှင့်စိုက်ထူခြင်းပြproblemsနာများသည်အိုမင်းခြင်းဖြစ်စဉ်နှင့်ဆက်စပ်သောဇီဝကမ္မဆိုင်ရာပြောင်းလဲမှုများကြောင့်ဖြစ်နိုင်သည့်အသက်အရွယ်ကိုမှီခိုသောရောဂါများဖြစ်သည်။ အမှန်မှာကျွန်ုပ်တို့၏ရလဒ်များသည် MMAS မှထုတ်ပေးသောရလဒ်များနှင့်ကိုက်ညီသည်။ ၎င်းသည်၎င်း၏နမူနာ၏ 9.6% သည်ပြီးပြည့်စုံသောခွန်အားမရှိကြောင်းတွေ့မြင်ပြီး 5% မှ 15% မှ 40 နှင့် 70 နှစ်အလိုက်ဘာသာရပ်သက်တမ်းအကြားခိုင်မာသည့်အသက်အရွယ်အသင်းအဖွဲ့ကိုပြသခဲ့သည်။7
ကျန်းမာရေးနှင့်လူနေမှုပုံစံစသည့်အခြားသောအချက်များမှာလူ ဦး ရေအလိုက်ကွဲပြားသောခန့်မှန်းမှုများဖြစ်သည်။ လက်မထပ်ရသေးသည့်အခြေအနေသည်ယေဘုယျအားဖြင့်သာယာဝပြောမှုနှင့်ဆက်စပ်နေသော်လည်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှု၏အန္တရာယ်မြင့်မားသောအရာမှာလိင်ဆိုင်ရာလူနေမှုပုံစံကွဲပြားမှုများမှဖြစ်နိုင်သည်။ အလားတူစွာပညာရေးအဆင့်အတန်းနိမ့်ကျခြင်းနှင့်လူနည်းစုအဆင့်အတန်းမြင့်မားသောစွန့်စားမှုများသည်ပိုမိုကောင်းမွန်သောပညာတတ်ပုဂ္ဂိုလ်များသည်ကျန်းမာသန်စွမ်းပြီးရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်စိတ်ပိုင်းအရစိတ်ဖိစီးမှုနည်းပါးသောဘဝပုံစံများဖြစ်ကြောင်းသက်သေထူသည်။ တစ် ဦး ချင်းစီအားလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှုကိုဖြစ်ပေါ်စေသည့်အကြောင်းရင်းများကိုနားလည်ရန်ကျွန်ုပ်တို့သည်အန္တရာယ်အချက်များအားဆန်းစစ်သင့်သည်။
NHSLS ၏အချက်အလက်များအရအမျိုးသမီးများနှင့်အမျိုးသားများအကြားစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်စိတ်ဖိစီးမှုနှင့်ဆိုင်သောပြtheနာများသည်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတုန့်ပြန်မှုသံသရာ၏အဆင့်အားလုံးတွင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအခက်အခဲများကြုံတွေ့ရနိုင်သည့်မြင့်မားသောအန္တရာယ်ကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်ကိုဖော်ပြသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ဤဆက်နွယ်မှု၏ကျိုးကြောင်းဆက်နွှယ်မှုသည်မသေချာကြောင်းသတိပေးနေစဉ်ဤရလဒ်များကစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလူမှုပြurနာများသည်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလုပ်ငန်းဆောင်တာများကိုအကျိုးသက်ရောက်ကြောင်းဖော်ပြသည်။ ၎င်းသည်ကျန်းမာရေးညံ့ဖျင်းခြင်း၏သက်ရောက်မှုကိုအရေးမကြီးဟုဆိုလိုခြင်းမဟုတ်ပါ။ အမှန်မှာ၊ အသက်အရွယ်၊ ကျန်းမာရေးပြproblemsနာများနှင့်ဆီးလမ်းကြောင်းရောဂါကူးစက်မှုများကြောင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှုကိုပိုမိုဖြစ်ပေါ်စေသည့်အတွက်ဆန့်ကျင်ဘက်အားပြသသည်။ ယင်းအစား, ဇီဝကမ္မနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ status ကိုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလုပ်ငန်းဆောင်တာကိုအကျိုးသက်ရောက်စေသည့်လွတ်လပ်သောအချက်များဖြစ်ကြသည်။
လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှုအပေါ်စိတ်ခံစားမှုဆိုင်ရာစိတ်သောကရောက်ခြင်းကိုပေးထားသောကျွန်ုပ်တို့သည်လူမှုရေးအဆင့်အတန်းနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်ဒဏ်ရာဖြစ်သည့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလူမှုစိတ်ဖိစီးမှု၏အခြေခံအရင်းအမြစ်များဖြစ်သော2ကိုကျွန်ုပ်တို့ဆန်းစစ်သည်။ NHSLS ၏အချက်အလက်များအရလူမှုအနေအထားယိုယွင်းပျက်စီးခြင်းသည်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလုပ်ငန်းဆောင်တာများကိုဆိုးဆိုးရွားရွားထိခိုက်စေသည်။ စီးပွားရေးအခြေအနေပိုမိုဆိုးရွားလာခြင်းသည်စိတ်ဖိစီးမှုများသောအဆင့်ကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။ ၎င်းသည်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလုပ်ငန်းဆောင်တာများကိုအကျိုးသက်ရောက်စေသည်။ ရလဒ်သည်အမျိုးသားများထက်အမျိုးသမီးများအကြားပျံ့နှံ့သွားသည်။ အနာဂတ်သုတေသနကိုစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဆင်းရဲဒုက္ခများ၏လူမှုရေးဖြန့်ဖြူးမြေပုံဆီသို့ ဦး တည်သင့်သည်။
စိတ်ဒဏ်ရာရရှိနိုင်သောလိင်ဆိုင်ရာအတွေ့အကြုံများနှင့် ပတ်သက်၍ ကျွန်ုပ်တို့၏တွေ့ရှိချက်များသည်ရှုပ်ထွေးပြီးလိင်ကွဲပြားမှုကိုပြသသည်။ သို့သော်၎င်းတွေ့ကြုံမှုများသည်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလူမှုစိတ်ဖိစီးမှု၏အရင်းအမြစ်များဖြစ်ကြောင်းရှင်းလင်းစွာသက်သေပြသည်။ ပထမ ဦး စွာကျွန်ုပ်တို့သည်လိင်တူခြင်းလုပ်ငန်း၏သက်ရောက်မှုသည်အမျိုးသားများနှင့်သက်ဆိုင်သော်လည်းအမျိုးသမီးများအတွက်မဟုတ်ကြောင်းတွေ့ရှိရသည်။ ဤခြားနားချက်၏အရင်းအမြစ်သည်ဤလိင်လုပ်ရပ်များ၏အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်တွင်အမြစ်တွယ်နေနိုင်သည်။ ဤရလဒ်များသည်လိင်တူချင်းချစ်ခြင်းမေတ္တာနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပြproblemsနာများ၏ဆက်စပ်မှုမဟုတ်ဘဲလိင်တူခြင်း၏သမိုင်းဖြစ်ရပ်များ၏သက်ရောက်မှုကိုအကဲဖြတ်ကြောင်းသတိပြုသင့်သည်။ အလားတူစွာလိင်အကြမ်းဖက်မှုအတွက်ညွှန်းကိန်းများသည်နှစ် ဦး စလုံး၏လူပုဂ္ဂိုလ်များအပေါ်ပြင်းထန်သောအကျိုးသက်ရောက်မှုများကိုပြသသည်။ အမျိုးသမီးများအတွက်၊ အရွယ်ရောက်ကလေးသူငယ်များနှင့်အဆက်အသွယ်ရှိခြင်း (သို့) အတင်းအဓမ္မလိင်ဆက်ဆံခြင်းသည်အများအားဖြင့်အမျိုးသားများကကျူးလွန်သောအမှုများသည်နှိုးဆွမှုမမှန်ခြင်းများကိုပိုမိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။ ဤရလဒ်သည်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်ဒဏ်ရာများသည်ကြာရှည်ခံသည့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလူမှုရေးဆိုင်ရာနှောင့်ယှက်မှုများကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်ဟူသောအယူအဆကိုထောက်ခံသည်။ နောက်ဆုံးတွင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလုပ်ငန်းဆောင်တာများကိုအကျိုးသက်ရောက်စေသည်။28 အလားတူစွာအပျိုဖော်ဝင်မတိုင်မီလိင်ဆက်ဆံခဲ့သည့်အမျိုးသားများသည်လည်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှုအမျိုးအစားအားလုံးကိုတွေ့ကြုံရန်ပိုများသည်။ အတိုချုပ်ပြောရလျှင်မလိုလားအပ်သောလိင်ဆက်ဆံမှုခံရသူအမျိုးသမီးများနှင့်အမျိုးသားများနှစ် ဦး စလုံးသည်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလုပ်ငန်းဆောင်တာများတွင်ရေရှည်အပြောင်းအလဲများရှိကြသည်။
အရည်အသွေးနှင့်သက်ဆိုင်သောဆက်စပ်မှုများနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှုများကြားရှိဆက်စပ်မှုကိုလည်းစုံစမ်းရန်လိုအပ်နေသေးသော်လည်း NHSLS ၏အချက်အလက်များတွင်တွေ့ရှိရသောခိုင်မာသည့်အသင်းအဖွဲ့များသည်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှုကိုလေ့လာခြင်းမပြုရသေးသောပြည်သူ့ကျန်းမာရေးပြproblemနာဖြစ်သည်။ erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုအတွက်ကုထုံးတိုးတက်မှုသည်အချို့သောအမျိုးသားများအတွက်ဘ ၀ ၏အရည်အသွေးကိုမြင့်တက်စေနိုင်သည်။ သုခချမ်းသာသုခသည်အမျိုးသမီးလိင်ဆိုင်ရာပြproblemsနာများနှင့်အလွန်ဆက်စပ်မှုရှိသဖြင့်သုတေသီများသည်ထိုပြproblemsနာများ၏နောက်ဆက်တွဲများကိုဖော်ထုတ်ရန်နှင့်သင့်လျော်သောကုထုံးများဖော်ထုတ်ရန်အာရုံစိုက်သင့်သည်။ ဘေးဒဏ်သင့်သူများသည်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှုအတွက်ဆေးဝါးကုသမှုခံယူခဲသောကြောင့်အန္တရာယ်မြင့်မားသောလူများကိုပစ်မှတ်ထားရန် ၀ န်ဆောင်မှုပေးခြင်းလုပ်ငန်းများကိုတိုးမြှင့်သင့်သည်။
Kinsey et al နောက်ပိုင်းရာစုနှစ်ဝက်အတွင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှု၏ပထမ ဦး ဆုံးလူ ဦး ရေအခြေပြုအကဲဖြတ်မှုကိုဤအစီရင်ခံစာကတင်ပြသည်။29,30 NHSLS မှရလဒ်များအရလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပြproblemsနာများသည်လူ့အဖွဲ့အစည်းတွင်ကျယ်ပြန့်စွာရှိပြီးကျန်းမာရေးနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလူမှုရေးဆိုင်ရာအချက်များကြောင့်ဖြစ်သည်။ တစ် ဦး ချင်းဖြစ်စေ၊ လူမှုရေးအရဖြစ်စေစိတ်ဖိစီးမှုဖြစ်စေသည့်အဖြစ်အပျက်များသည်အမျိုးသားများနှင့်အမျိုးသမီးများအတွင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလုပ်ငန်းဆောင်တာများကိုအကျိုးသက်ရောက်စေနိုင်သည်ဟုဖော်ပြသည်။ လိင်၊ အသက်နှင့်လူ ဦး ရေအချိုးအစားအုပ်စုများအကြားလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှု၏ကွဲပြားခြားနားသောပုံစံများကို etiologic ယန္တရားများအပေါ်ထပ်မံသုတေသနပြုရန်လိုအပ်ကြောင်းမီးမောင်းထိုးပြခဲ့သည်။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှုနှင့်ဘဝအရည်အသွေးနိမ့်ကျခြင်းများအကြားခိုင်မာသည့်ဆက်နွယ်မှုရှိခြင်းကြောင့်ဤပြproblemနာသည်ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာစိုးရိမ်ဖွယ်ရာအဖြစ်အသိအမှတ်ပြုခြင်းကိုအာမခံသည်။
အမေရိကန်စိတ်ရောဂါအသင်း။ စိတ်ရောဂါ၏ရောဂါနှင့်စာရင်းအင်းလက်စွဲစာအုပ်, စတုတ္ထထုတ်ဝေ။ ၀ ါရှင်တန်ဒီစီ: အမေရိကန်စိတ်ရောဂါအသင်း၊ 1994: 493-522 ။
Morokoff PJ၊ Gillilland R. စိတ်ဖိစီးမှု၊ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလုပ်ဆောင်မှုနှင့်အိမ်ထောင်ရေးကျေနပ်မှု။ J ကိုလိင် Res ။1993; 30: 43-53 ။
Fugl-Meyer AR, Lodnert, G, Branholm IB, Fugl-Meyer KS ။ အထီး erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုအတွက်ဘဝကျေနပ်မှုတွင်။ int J ကိုသင်ျခြို Res ။1997; 9: 141-148 ။
Frank E၊ Anderson C, Rubinstein E“ ပုံမှန်” စုံတွဲများတွင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှု၏ကြိမ်နှုန်း။ N ကို Engl J ကို Med ။1978; 299: 111-115 ။
Rosen RC, တေလာ JF, Leiblum SR, Bachmann GA ။ အမျိုးသမီးများအနေဖြင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှု၏ပြန့်ပွားမှု - ပြင်ပလူနာမီးယပ်အထူးကုဆေးခန်းရှိအမျိုးသမီး ၃၂၉ ဦး အားစစ်တမ်းကောက်ယူမှု၏ရလဒ်များ။ J ကိုလိင်အိမ်ထောင်ရေး Ther ။1993; 19: 171-188 ။
Spector IP, ကယ်ရီအမတ်။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှု၏ဖြစ်ပွားမှုနှင့်ပျံ့နှံ့: ပင်ကိုယ်မူလစာပေတစ်ခုဝေဖန်ပြန်လည်သုံးသပ်။ Arch လိင်ပြုမူနေ။1990; 19: 389-408 ။
Feldman HA, Goldstein I, Hatzichristou DG, Krane RJ, McKinlay JB ။ ခွန်အားမရှိခြင်းနှင့်၎င်း၏ဆေးဘက်ဆိုင်ရာနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဆက်စပ်မှုများ - မက်ဆာချူးဆက်အမျိုးသားအိုမင်းလေ့လာမှု၏ရလဒ်များ။ J ကို Urol ။1994; 151: 54-61 ။
အားနည်းခြင်းဆိုင်ရာ NIH သဘောတူညီမှုဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့။ ခွန်အားမရှိခြင်း။ ဂျေအေအမ်အေ။1993; 270: 83-90 ။
Rajfer J, Aronson WJ, Bush PA, Dorey FJ, Ignarro LJ ။ nonadrenergic, noncholinergic neurotransmission ကိုတုံ့ပြန် Corpus cavernosum ၏အပန်းဖြေ၏ဖျန်ဖြေအဖြစ်နိုက်ထရစ်အောက်ဆိုဒ်။ N ကို Engl J ကို Med ။1992; 326: 90-94 ။
Burnett AL ။ စိုက်ထူ၏ဇီဝကမ္မဗေဒအတွက်နိုက်ထရစ်အောက်ဆိုဒ်၏အခန်းကဏ္.ကို။ Biol Reprod ။1995; 52: 485-489 ။
Park K၊ Goldstein ၁၊ Andry C၊ Siroky MB၊ Krane RJ၊ Azadzoi KM ။ အမျိုးသမီးအင်္ဂါလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှု: ယောနိထိုးဖောက်ခြင်းနှင့် clitoral erectile မလုံလောက်မှုအတွက် hemodynamic အခြေခံ။ int J ကိုသင်ျခြို Res ။1997; 9: 27-37 ။
Boolell M, Gepi-Attee S, Gingell JC, Allen MJ Sildenafil: အထီး erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုများအတွက်ထိရောက်သောပါးစပ်ဖြင့်ကုသခြင်း။ br J ကို Urol ။1996; 78: 257-261 ။
apomorphine ၏ပါးစပ်အုပ်ချုပ်ရေးအားဖြင့် erectile function ကို၏ Heaton JP, Morales တစ် ဦး, အဒမ် MA, Johnston B, el-Rashidy R. ပြန်လည်ထူထောင်ရေး။ Urology ။1995; 45: 200-206 ။
Morales A၊ Heaton JP၊ Johnston B၊ အမ်အမ်ပါးစပ်နှင့် erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှု၏လိမ်းဆေး: ပစ္စုပ္ပန်နှင့်အနာဂတ်။ Urol Clin မြောက်မိပါတယ်။1995; 22: 879-886 ။
ရို RC, Ashton က AK ။ Prosexual မူးယစ်ဆေးဝါးများသည် "၏အသစ်သော aphrodisiacs" ၏ပင်ကိုယ်မူလအဆင့်အတန်း။ Arch လိင်ပြုမူနေ။ 1993; 22: 521-543 ။
Segraves RT၊ Saran A၊ Segraves K၊ Maguire E. Clomipramine နှင့်အချိန်မတန်သေးသောသုက်လွှတ်မှုကုသမှုကိုခံနိုင်ရည်ရှိခြင်း - ရှေ့ပြေးလေ့လာမှုတစ်ခု။ J ကိုလိင်အိမ်ထောင်ရေး Ther ။1993; 19: 198-200 ။
Laumann EO, Gagnon JH, Michael RT, Michael S. လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလူမှုအဖွဲ့အစည်း - ယူနိုက်တက်စတိတ်ရှိလိင်အလေ့အကျင့်များ။ ချီကာဂို, မကျန်းမမာ: ချီကာဂိုစာနယ်ဇင်းတက္ကသိုလ်; 1994 ။
Clogg CC ။ ငုပ်လျှိုးနေလူတန်းစားမော်ဒယ်များ။ ခုနှစ်တွင်: Arminger, G, Clogg CC ကို, Sobel ME, eds ။ လူမှုရေးနှင့်အပြုအမူဆိုင်ရာသိပ္ပံပညာအတွက်စာရင်းအင်းပုံစံထုတ်ခြင်းလက်စွဲစာအုပ်။ နယူးယောက်၊ နယူးယော့ခ် - Plenum စာနယ်ဇင်း၊ 1995: 311-359
McCutcheon AL ။ latent အတန်းအစားအားသုံးသပ်ခြင်း။ Newbury Park, ကာလီဖိုးနီးယား။ 1987 ။
Uebersax JS, Grove WM ။ ရောဂါရှာဖွေသဘောတူညီချက်၏ငုပ်လျှိုးနေလူတန်းစားခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ။ Stat Med ။1990; 9: 559-572 ။
Young က MA ။ ရောဂါရှာဖွေစံသတ်မှတ်ချက်များကိုအကဲဖြတ်ခြင်း: ငုပ်လျှိုးနေတဲ့လူတန်းစားပါရာဒိုင်း။ J ကိုစိတ်ရောဂါ Res ။1983; 17: 285-296 ။
Young က MA, သားရေလုပ်သမား MA, Meltzer HY ။ schizophrenia ၏စစ်ဆင်ရေးအဓိပ္ပာယ်: သူတို့ဘာကိုခွဲခြားသတ်မှတ်သလဲ? J ကိုအာရုံကြော Ment dis ။1982; 170: 443-447 ။
Rindskopf D ကို, Rindskopf ဒဗလျူဆေးဘက်ဆိုင်ရာရောဂါအတွက်ငုပ်လျှိုးနေလူတန်းစားခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ၏တန်ဖိုး။ Stat Med ။1986; 5: 21-27 ။
Eaton WW, McCutcheon AL, Dryman A, Sorenson A. စိုးရိမ်ပူပန်မှုနှင့်စိတ်ဓာတ်ကျမှု၏လျှို့ဝှက်လူတန်းစားခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ။ Sociol နည်းလမ်းများ Res ။1989; 18: 104-125 ။
Kohlman T က, Formann AK ။ epidemiologic မေးလ်စစ်တမ်းများတွင်တုံ့ပြန်မှုပုံစံများကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာရန်လျှို့ဝှက်လူတန်းစားမော်ဒယ်များကိုအသုံးပြုခြင်း။ ခုနှစ်တွင်: Rost J ကို, Langeheine R ကို, eds ။ လူမှုသိပ္ပံအတွက်ငုပ်လျှိုးနေ Trait နှင့် latent အတန်းအစားမော်ဒယ်များ၏ applications များ။ နယူးယောက်၊ NY: Waxmann Munster 1997: 345-351
Clogg CC ။ အကန့်အသတ်မရှိနှင့်ကန့်သတ်ထားနိုင်သောအများဆုံးဖြစ်နိုင်ခြေရှိသောငုပ်လျှိုးနေသည့်ဖွဲ့စည်းပုံဆိုင်ရာခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း - အသုံးပြုသူများအတွက်လမ်းညွှန်။ University Park, Pa: လူ ဦး ရေဆိုင်ရာသုတေသနဌာန၊ Pennsylvania ပြည်နယ်တက္ကသိုလ်၊ 1977 MLLSA အလုပ်လုပ်ကိုင်စက္ကူ 1977-09 ။
STATA ဖြန့်ချိ5ကောလိပ်ဘူတာ, Tex: Stata စာနယ်ဇင်း; 1997 ။
Browning ကို C, Laumann EO ။ ကလေးများနှင့်လူကြီးများအကြားလိင်ဆက်ဆံမှု - အသက်ကယ်ရှုထောင့်။ နံနက် Sociol ဗျာ1997; 62: 540-560 ။
Kinsey AC, Pomeroy WB၊ Martin CE ။ လူ့အမျိုးသမီးအတွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ။ Philadelphia, Pa: WB Saunders Co. , ၁၉၄၈ ။
Kinsey AC, Pomeroy WB၊ Martin CE ။ et al ။ လူ့အမျိုးသမီးအတွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ။ Philadelphia, Pa: WB Saunders Co. , ၁၉၄၈ ။